I-Utopia: Isistimu yezemvelo ye-P2P ethokozisayo esezingeni elifanele yeLinux | Kusuka kuLinux
Okuthunyelwe kwethu namuhla kumayelana ne- I-IT Project ethokozisayo nokunye lokho kusebenza njenge isisombululo sobuchwepheshe bonke futhi a ipulatifomu eku-inthanethi ehlanganisa okuhle kakhulu kwe- Umhlaba weDeFi ne Umhlaba we-GNU / Linux. Futhi igama lakho ngu "Utopia" okuthi ngasendleleni, kuveze kahle ubukhulu bezinhloso zalo.
"Utopia", ngokuyisisekelo kungokusho kwabadali bayo a konke kukhithi eyodwa ukusebenzisa imiyalezo ephephile ephephile, ukuxhumana nge-imeyili okubethelwe, ukukhokha okungaziwa, nokuphequlula iwebhu kwangasese. Yini ngaphezu kwalokho, kuhle ukusebenzisa ku Izinhlelo Zokusebenza ze-GNU / Linux, ngoba, ivumela ukwenza imali ukusetshenziswa kwayo ngenani elihle le- Imemori ye-RAM (4 GB) iyatholakala nekheli le-IP elisesidlangalaleni elinqunyelwe.
I-Adamant: Uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo olungaziwa lwamahhala nokuningi
Ububanzi balokhu Iphrojekthi ye-IT Iyafana kakhulu, kepha inamandla kakhulu kunezinye ezifanayo esizihlolile sabelana ngazo ngaphambili. Ngakho-ke, sizoshiya ngokushesha izixhumanisi kushiwo okuthunyelwe kwangaphambilini okuhlobene ala maphrojekthi, ukuze kuthi uma kunesidingo afundeke kalula:
"I-Adamant ingumthombo ovulekile wesicelo semiyalezo esuselwa kubuchwepheshe be-blockchain, yona esebenza njengesikhwama se-Crypto kanye ne-Cryptocurrency Exchange System (Exchange). I-Adamant isetshenziselwa izinto eziningi futhi inikezelwe ngaphansi kobuchwepheshe be-blockchain, futhi ifana nezinye ezifana neJuggernaut, Sphinx neSimo. Kusukela, iJuggernaut, iSphinx neSimo, akugcini ngokuba nezinzuzo ezithokozisayo njengezicelo zemiyalezo, kepha njengendlela noma indlela yokukhokha, ngoba kusekelwe kuBlockchain Technology".
I-Juggernaut, i-Sphinx nesimo: Izinhlelo zokusebenza zokuthumela imiyalezo ezithandekayo
1 I-Utopia: Imilayezo esheshayo, izinkokhelo, nokuphequlula okuyimfihlo
1.1 Yini i-Utopia?
1.2 Yini i-Utopia ebanikeza abasebenzisi bayo?
1.3 Uyisebenzisa kanjani i-Utopia ku-GNU / Linux?
1.4 Imininingwane eyengeziwe mayelana neMining Bot
1.5 Usebenzisa ompompi ukuthola ingxenye yamahhala ye-Crypton (CRP)
2 Imininingwane engaphezulu ehlobene
I-Utopia: Imilayezo esheshayo, izinkokhelo, nokuphequlula okuyimfihlo
Ngokusho kwabathuthukisi balokhu Iphrojekthi yeDeFi in yakhe Iwebhusayithi esemthethweni, "Utopia" ichazwe kafushane nangokuqondile njenge:
"A Zonke izinto ezikodwa zokusebenzisa imilayezo esheshayo ephephile, ukuxhumana nge-imeyili okubethelwe, izinkokhelo ezingaziwa, nokuphequlula iwebhu kwangasese. Noma ngamanye amagama: Ikhithi yamathuluzi ehamba phambili eku-inthanethi yemiyalezo esheshayo, izinkokhelo nokuphequlula okuyimfihlo".
Ngenkathi, ngendlela ecacile nenemininingwane, bayangeza lokho "Utopia" es:
"Umkhiqizo wokukhuthaza inkululeko, ukungaziwa nokungabikho kokuvinjelwa, okwenzelwe ukuxhumana okuphephile, ukukhokha okungaziwa nokusetshenziswa kwe-inthanethi okukhululekile futhi okungenamngcele. Ukuqashwa okuphelele, ukulawulwa kokuhamba kolwazi, kanye nokukhohlisa okusemthethweni yilokho i-Utopia ehlose ukukuvimbela. Uma usebenzisa i-Utopia, uBig Brother ngeke esakubuka.
Nge-Utopia ungadlula ekucwaningweni okuku-inthanethi nakuma-firewalls, ukuze ukwazi ukuxhumana nanoma ngubani omfunayo, lapho ufuna. Isimo semvelo sase-Utopia siqinisekisa inkululeko yokukhuluma. Indawo yangempela yomsebenzisi ayikwazi ukudalulwa. Ukuxhumana nedatha akukwazi ukubanjwa noma kufundwe umuntu wesithathu. Yonke idatha ye-akhawunti igcinwa kudivayisi yasendaweni yomsebenzisi we-Utopia kufayela elibethelwe".
Yini i-Utopia ebanikeza abasebenzisi bayo?
Ukuxhumana okuphephile ukumelana nokulawula: Ukufeza nokuletha ukuxhumana ngekhodi, izwi, kanye ne-imeyili ngokushesha.
Isikhwama esihlanganisiwe, ama-CryptoCards kanye ne-API yabathengisi: Ukuze abasebenzisi bakwazi ukwenza futhi baqoqe izinkokhelo nge Crypton, Imali ka-Utopia eyakhe ngogesi. I-ecosystem futhi isebenzisa i-crypto ezinzile ebizwa nge-Utopia USD (UUSD) eboshelwe kunani lika- $ 1.
I-crypto-assets Exchange System ehlanganiswe neplatifomu ye-Utopia uqobo (i-Crypton Exchange): Okunikeza abasebenzisi ukubhaliswa kwe-akhawunti okungaziwa futhi okuzenzakalelayo, imodeli yemali ephansi noma engekho, ukukhishwa okuzenzakalelayo okungenamkhawulo, ukumelana nokucwaninga, isici sokuxoxa somphakathi, nenhlonipho yangempela ngempendulo yomsebenzisi.
Inethiwekhi ye-P2P esezingeni eliphansi: Lapho kungekho khona amaseva aphakathi nendawo futhi umsebenzisi ngamunye eyi-router yenethiwekhi.
Imayini elula: Ukuvumela abasebenzisi ukuthi bathole ama-cryptons ngokusebenzisa i-Utopia yezimayini bot online futhi ngaleyo ndlela benze imali ukusetshenziswa kohlelo lwabo lwe-GNU / Linux kanye nokusetshenziswa kwe-Utopia Platform.
Umpompi olulaIsixhumi esibonakalayo sewebhu esikuvumela ukuthi uwine ingxenyenamba engahleliwe ye-Crypton (CRP) usebenzisa isiphequluli sewebhu esihlanganisiwe, kanye kuphela nge-Wallet.
Idizayini ehlonipha ukungaziwaI-Utopia iqinisekisa ubumfihlo babasebenzisi, ngoba ikheli le-IP nobunikazi babo abunakudalulwa.
Ukuqaliswa kwe-uNS: Uhlelo lokuqamba igama lomnikazi we-Utopia Platform, olunikeza ukubhaliswa okwabelwe izikhundla ngokweqiniso futhi okungavunyelwe, futhi lilingana ne-DNS yakudala.
Ukuphequlula okuphephile usebenzisa isiphequluli esihlanganisiwe se-Idyll: Okusebenza njengenye indlela yesiphequluli se-Tor futhi kwenza kube lula ukuzulazula ku-Utopia ecosystem.
Isitoreji nokuphepha: Ngokusebenzisa ukubethela kwe-AES okungama-256-bit nejubane elikhulu 25519.
Uyisebenzisa kanjani i-Utopia ku-GNU / Linux?
Ngokulandelayo sizokhombisa izithombe-skrini ezilandelanayo ze- landa, faka, lungiselela futhi usebenzise izicelo zePlatform "Utopia". Kuyaphawuleka ukuthi, kuleli cala elisebenzayo sizosebenzisa okujwayelekile Phendula i-Linux kubizwa Izimangaliso GNU / Linux, okusekelwe I-MX Linux 19 (I-Debian 10), futhi lokho kwakhiwe ngokulandela i- «Umhlahlandlela we-Snapshot MX Linux».
Njengesinyathelo sokuqala, kufanele ulande amaphakheji ama-2 ahambelana ne- "Utopia" ye-Linux in yakhe isigaba sokulanda esisemthethweni. Esokuqala yileso esihambelana nesikhombimsebenzisi sokuqhafaza semvelo, okuyi-multiplatform (IWindows, MacOS neLinux) kanti eyesibili yilena ehambelana nayo Imayini bot ngokusetshenziswa kwememori ye-RAM lokho kuphela Linux.
Uma zombili zilandiwe, ungaqhubeka ngezinyathelo ezilandelayo:
Faka isikhombimsebenzisi sokuqhafaza sohlelo lwe- «Utopia»: Ngomyalo olandelayo womyalo ku-terminal (console)
Ukwenza isikhombimsebenzisi sokuqhafaza sohlelo lwe- «Utopia»: NgeMenyu Yezicelo.
Ukuqala ukumiswa kwesibonisi sokuqhafaza sohlelo lwe- «Utopia».
Imayini yokuqinisekisa imayini yesibonisi sokuqhafaza sohlelo lwe- «Utopia» lwe-ecosystem
Ukufaka i-bot bot yezimayini ye- «Utopia» ecosystem: Ngomyalo olandelayo womyalo ku-terminal (console)
Ukusetshenziswa kwe- "Utopia" Imayini Bot Bot: Ngomyalo olandelayo womyalo ku-terminal (console)
Imodi yokuzenzakalelayoKusetshenziswa indlela ezenzakalelayo kanye negama elingukhiye lesistimu, okungukuthi, ikheli lokhiye womphakathi okhiqiziwe noma i-ID ye- I-Utopia Wallet (uWallet).
Imodi ehlukileKusetshenziswa indlela ephelele kanye negama elingukhiye lesistimu, okungukuthi, ikheli lokhiye womphakathi okhiqiziwe noma i-ID ye- I-Utopia Wallet (uWallet).
Sebenzisa isiphequluli se-Idyll esakhelwe ngaphakathi.
Imininingwane eyengeziwe mayelana neMining Bot
Gcina wazi ukuthi ukusebenzisa i- Imayini Bot okungenani isivumelwano esihle se- Imemori ye-RAM (4 GB) iyatholakala futhi a ukuxhumana okuhle kwe-inthanethi nge elula IP Yomphakathi. Futhi kunconyelwa ukuphepha kwamakhompiyutha, ukusebenzisa ama-bots wezimayini kumakhompyutha ahlukaniswe namakhompyutha lapho kusetshenziswa khona isikhombimsebenzisi sokungena ku-Platform. "Utopia".
Noma kunjalo, ikhompyutha eyodwa ebonakalayo ingasetshenziswa ukufinyelela i-Graphical Interface ukufinyelela ku-Platform. "Utopia" nomunye noma ngaphezulu Imishini Ebonakalayo (MV) cishe okufanayo kwe- Ama-bots aqediwe kuyadingeka
Usebenzisa ompompi ukuthola ingxenye yamahhala ye-Crypton (CRP)
Kodwa-ke, kulabo abangakwazi ukukhipha i-Crypton besebenzisa i-GNU / Linux Mining Bot ekhethekile, ngoba abanayo i-IP yomphakathi ehleliwe, i-RAM eyanele noma i-Intanethi esezingeni, kunendlela elula yokuthola isikhathi esisodwa, i-Crypton mahhala usebenzisa i-Utopia. Izimali ezingasetshenziswa phakathi kwezinto eziningi ukuklomelisa / ukuxhasa / ukukhokha / ukunikela kwabanye abasebenzisa i-GNU / Linux. Udinga kuphela ukulandela lezi zinyathelo ezilandelayo, ngasikhathi sinye:
Vula uhlelo lwethu lokusebenza lwe-utopia.
Vula isiphequluli sewebhu esihlanganisiwe se-Idyll.
Bhala i-url "http: // isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu" kubha yokusesha / yekheli.
Faka i-web interface evulekile ukhiye wethu womphakathi (isikhwama semali) ukuthola izingxenyana zamahhala ze-Crypton (CRP), gcwalisa ikhodi ye-captcha ekhonjisiwe bese uchofoza inkinobho ethi "Get Free Crypton", ukuze i-Crypton (CRP) ithunyelwe ku uWallet wethu khona manjalo.
Linda imizuzwana embalwa bese uqinisekisa ukudluliswa kwezimali ku-uWallet wohlelo lokusebenza lwe-Utopia.
Imininingwane engaphezulu ehlobene
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngeqembu elingemuva "Utopia" nengxenyekazi uqobo lwayo "Utopia" ungavakashela okulandelayo izixhumanisi ezisemthethweni ezifundisayo:
I-FAQ esemthethweni yewebhusayithi
Enye Iwebhusayithi I-Explorer Explorer FAQ
Futhi uma kwenzeka ufuna ukwazi futhi uhlole ngamanye amaphrojekthi athakazelisayo, awusizo futhi ahlukile angasebenza njenge Izinhlelo Zokuthumela Imiyalezo Ngokushesha sizoshiya ngokushesha izixhumanisi ezishicilelwe ezedlule ezihlobene nazo ngezansi.
UJami: Ipulatifomu entsha yokuxhumana kwamahhala nokuvamile
I-Delta Chat: Uhlelo lokusebenza lokuthumela imiyalezo lwamahhala futhi oluvulekile olususelwa ku-imeyili
Isikhathi: Uhlelo Lokusebenza Lokuthumela Imiyalezo Oluvulekile
Futhi ekugcineni, sifisa lokhu I-Project DeFi ethokozisayo, ehlukile futhi ekhiqizayo, ngoba, uma igcinwa, ithuthukiswa futhi ifakwa ngokuhamba kwesikhathi, izosebenziseka kakhulu futhi ibe nenzuzo kubasebenzisi be I-GNU / Linux.
Ikakhulukazi uma "Utopia" noma abanye Amaphrojekthi we-DeFi yalolu hlobo aqala ukuhlanganiswa I-GNU / Linux Distros. Vele, njalo kusukela ekuqaleni ukuthi konke Iphrojekthi yeDeFi, futhi kube ngangokunokwenzeka noma uvule ngokuphelele futhi ukhululeke. Lokhu kucaciswa kungenxa yokuthi okwamanje, "Utopia" Akuyona iphrojekthi ekhululekile futhi evulekile ngokuphelele, kepha ngokuzayo kuzozuzisa bonke, lapho iphrojekthi isikhule kahle futhi igcwele ngokweqile.
Ngokungangabazeki, lolu hlobo lwe Amaphrojekthi we-DeFi kuzovumela ukwenza imali ukusetshenziswa kwama-Operating Systems wamahhala futhi avulekile kusekelwe ku I-GNU / Linux ngokusebenzisa i-crypto eyingqayizivele noma eyakho enemali enhle nje ye- Imemori ye-RAM (4 GB) iyatholakala futhi a ukuxhumana okuhle kwe-inthanethi nge elula IP Yomphakathi. Okuhambisana kakhulu nomqondo wangaphambilini odaluliwe ongafundwa encwadini elandelayo ehlobene nayo:
I-Crypto: Masenze i-GNU / Linux ibe yinhle futhi! Nge-Cryptocurrency?
Ngokufingqa, "Utopia" kupholile futhi kuyathakazelisa Iphrojekthi yeDeFi lokho akunikezeli ngokuhle kuphela amathuluzi aku-inthanethi azo zonke izinhlobo zomsebenzisi, Kungakhathaliseki ideskithophu abo noma kumakhompyutha mobile esetshenziswa opharetha yabo Systems esetshenziswa, kodwa endabeni ethile I-Linuxeros futhi i I-GNU / Linux Distros unenzuzo yokwenza inzuzo ku- umhlaba we-Cryptocurrencies.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Utopia: Isistimu yezemvelo ye-P2P ethokozisayo esezingeni elifanele yeLinux
Impela le phrojekthi ingumthombo wamahhala noma ovulekile. Angicabangi ukuthi ungayibona ikhodi yale phrojekthi. Asisoze saqiniseka ukuthi yenzani ngaphandle kokukwazi ukubona ikhodi. Kunjalo?
Sanibonani, Mnel. Siyabonga ngokuphawula kwakho. Njengoba sishilo ku-athikili, kusho ukuthi iphrojekthi yeDeFi ayivuleki nge-100%, yingxenye yayo kuphela. Noma kunjalo, siyethemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi onjiniyela bayo bazoyenza ivuleke ngo-100% futhi mhlawumbe ibe mahhala. Okwamanje, idinga ukukhula, ithuthukise futhi ithuthukise okuningi, ikakhulukazi maqondana nokuthi yini emahhala futhi evulekile ukuba ibe yisixazululo se-IT esifanele abasebenzisi beLinux. Okwamanje, njengoba isihloko sisho sithi "Uhlelo olumnandi lwe-P2P lwe-ecosystem lweLinux." Futhi ukwehluleka lokho, ngethemba ukuthi abanye abathuthukisi noma imiphakathi izokwakha esinye isixazululo esifana ne-100% samahhala futhi esivulekile se-IT.
ikhodi yomthombo evaliwe kulolu hlelo lokusebenza ifaneleka kakhulu: khumbula ukuthi mangaki ama-Hacks namafoloko avuliwe izinhlelo zokusebenza. Konke kunezinzuzo nezingozi, kodwa ngicabanga ukuthi ngaphansi kwemisebenzi ye-utopia, konke kwenziwa kahle.
Sawubona, Keven. Siyabonga ngokuphawula kwakho futhi usitshele okuqaphele mayelana ne-Utopia.
Ukwenza ngcono kusho
I-Utopia ingenye ye-ecosystem engcono kakhulu yonke engake ngayisebenzisa! Ngokunethezeka nangokungaziwa, yini enye oyidingayo?
Sawubona, Islah. Siyabonga ngokuphawula kwakho futhi usitshele mayelana nolwazi lwakho mayelana nalolu hlelo lokusebenza.
I-GameMaker Studio 2: I-IDE yamageyimu we-2D Manje Ayatholakala ngeLinux
Izinhlelo ezihlukile zokusebenza ku-Linux: Izinketho zamanje ezi-3 ziyatholakala